Impembelelo ye-akhawunti ye-10 + ye-Twitter kwi-geospatial medium-Geofumadas
Impembelelo 10 + Twitter akhawunti kwi geospatial medium
NgoDisemba, 2012 Geospatial - GIS, Internet kunye neBlogs
Kwiintsuku ezimbalwa ezedlule senze isiluleko I-akhawunti ye-Twitter ye-15 ukulandela. Ukuvala unyaka we-2012 sihlaziya i-11 yokuqala yoluhlu, sicinga ngalabo abangabalandeli be-1,000; Idatha esiyakholelwa iya kuba luncedo kulabo abafana nezibalo ze-intanethi kunye nesinyathelo sokufunda i-SEO esetyenziselwe kumanethiwekhi asekuhlaleni.
Sifaka ezinye iinkalo ezibachazela ngolwazi oluthe ngqo:
Abalandeli / ulwalamano olulandelayo. Oku, ukwahlula phakathi kweakhawunti enabalandeli abaninzi kodwa ilandele kaninzi kangangokuba ubudlelwane bevoti ngokulungelelana bubangela uhlobo lwesandi. Ngoko ke, kumntu onabalandeli be-500 kwaye elandela i-500, ubudlelwane babo buya kuba yi-1, ukuba ilandele ngaphezu kweyayilandelayo, iya kuba ngaphantsi kweyodwa.
Iimpawu zempembelelo. Ezi zibonakaliswe kwimephu kwinqanaba elifanayo leendlela, ezibonisa i-magenta xa kunabalandeli abangaphezu kwe-1,000 kwingingqi egxininisiweyo; Umbala obomvu ubonisa iinombolo ezingaphezulu kwabalandeli be-100, i-orange kunye ne-10 kunye ne-celeste ngaphantsi kwe-10. Oku siye sithatha kusetyenziswa amandla Umlandeli. Isicelo sifanisa apho abalandeli be-akhawunti benza ukulungiswa ngokusekelwe kubalandeli bokwenene kunye nokuba ngaba-akhawunti kunye nabalandeli abaninzi, njengokungathi babe ne-5,000.
IGunya, le ngcaciso ebonelela Peerindex.com, okwenza uxinzelelo phakathi kweemeko ezahlukileyo, njengabalandeli, umphumo womsebenzi kunye nendlela efanelekileyo ngayo kubalandeli beakhawunti ukubona okubhaliweyo kukhuthazwa.
Ukongezelela sibeka iikopi eziphambili ze-10 ezibonisa abalandeli.
Siyacacisa ukuba kufuneka kubekho abanye, kodwa ngenxa yokuba phambili yethu yiGIS kunye ne-geospatial medium, sinciphisa ngokwee-akhawunti ze-11. I-5 yazo ngeendlela ze-Anglo-Saxon, i-2 enezinto eziphambili kwiimeko zesiPutukezi kunye ne-4 yesizwe saseSpeyin. Ngeli thuba, umyalelo apho siza kufaka khona iakhawunti iya kuba yinani labalandeli, nangona ekugqibeleni sishwankathela ukuba yeyiphi i-akhawunti iimeko ezingcono. Sithemba ukuhlaziywa kweli nqaku ngethuba, njengoko ezininzi zenguqu zedatha kunye nomsebenzi.
Ngabalandeli be-11,125, unamaziko e-3 e-United States, i-3 eYurophu, enye e-Asia kunye ne-American Caribbean.
Ubuhlobo nabalandeli yi4.46 kunye ne-67 Authority.
Amagama abalulekileyo abalandeli: GIS - iteknoloji - geospatial - iinkcukacha - izisombululo - ulwazi - ishishini - intlalo - isofthiwe - imephu
Abalandeli be-8,057, njengoko kubonakalayo, yedwa kuphela ene-magenta node (abalandeli be-1,423) eBrazil, ngaphezu kwee-reds ezimbini eMzantsi Melika, amabini eMntla Melika kunye ezimbini eYurophu.
Ngelishwa emva kokulandela abaninzi balabo abamlandelayo, okumnika i-0.91 ephantsi kakhulu ilandelayo
Kulo mzuzwana igunya ligqibe
Amagama abalulekileyo kulabo abamlandelayo: GIS - i-geography - ingqongileyo - geographer - ubomi-umfundi-uprofesa-indawo-nkampani-ihlabathi
Ngeenombolo ezibomvu ze-4: ezimbini eMzantsi Melika, enye e-United States kunye neYurophu.
Abalandeli be2,945 kunye nolwalamano kunye nale 2.21 elandelayo
Amagama abalulekileyo alabo abamlandelayo: GIS - geography - ulwazi - geographer - sig - injini-geography - esri - management - student
I-Meyi ye-2014 oku kukuhlaziywa kwe-Esri_Spain
Abalandeli be2,301; ubuninzi beNgingqi yase-Anglo-Saxon, ebonakalayo kwi-6 ebomvu, i-5 eNyakatho Melika kunye neYurophu.
Amagama abalulekileyo abalandeli bakhe: GIS - i-geospatial - idatha - imephu - ulwazi - iteknoloji - izakhono - izisombululo - iimephu - iimephu
NgoMeyi we-2014 nguyi-update ye-URISA
Okwangoku kunye nabalandeli be-1,831, amaqonga amabini ebonisa obomvu ukuba umqhubi omkhulu kuMesoamerica kunye nePenesila yase-Iberia.
Igunya le69, abalandeli be4.67
Amagama angundoqo kubalandeli: GIS - ulwazi - injini - i-geographie - i -pographic - sig - geographer - geography - isofthiwe - iinkqubo
Ngo-Meyi we-2014 lo uhlaziyo lwe-Geofumadas:
Le akhawunti ine-node ebomvu eSpain kunye enye eMzantsi Melika, kwindawo yaseBolivia.
Igunya le-14, ubudlelwane nabalandeli bayo be-1,816: 0.91
Amagama abalulekileyo abalandeli bakhe: geography - GIS - geographer - ulwazi - umfundi--injinjini-sig
Le akhawunti ineenkalo ejolise kakhulu, eSpanish kunye nefuthe elibelwanayo eLatin America.
Igunya le-21, ubudlelwane nabalandeli bayo be-1,543: 2.12
Amagama abalulekileyo abalandeli bakhe: geography - GIS - geographer - ulwazi - sig -topography - umfundi-master-engineer - geography
Abalandeli be-1,376, abaneenombolo ezibomvu ezintathu: i-2 e-United States kunye neYurophu. Ubuhlobo bakhe nabalandeli yi1.91
Amagama angundoqo kubalandeli: GIS - geospatial - idatha - imephu - izisombululo - isofthiwe-ulwazi-inkcazelo - ishishini-lomhlaba
Abalandeli be-1,375, kunye neendawo ezibomvu ezimbini e-United States kunye neYurophu. Ubudlelwane nabalandeli: 1.35
Amagama angundoqo kubalandeli: GIS - i-geospatial - idatha - ulwazi - i-geomatics - imephu - ukuqonda - ezikude-iinkonzo - izisombululo
Le enye ingxelo ibhalwe kwisiPutukezi, kunye neenombolo ezibomvu ze-2 eBrazil.
Abalandeli be1,218, kunye nabo 8.82 bagcina ubudlelwane
Amagama angundoqo kubalandeli: geography - geography - geoprocessamento - GIS - umfundi - iteknoloji - geotechnology - uprofesa - ukusingqongileyo - engenheiro
Ukuhlaziywa ngo-Ephreli 2014
Abalandeli be-1,023, kunye nobudlelwane be-5.19 kunye negunya le-6.
I-akhawunti eneenombolo ezimbini e-United States kunye neYurophu.
Amagama angundoqo kubalandeli: ukuhlolwa komhlaba GIS - ubunjineli - umcebisi -isisombululo - iinkonzo zengcali - i-geospatial - ukwakhiwa
Ngamafutshane, ii-akhawunti ezinomdla wokugcina umkhondo wento eyenzekayo kwi-geospatial medium. Itheyibhile elandelayo ibandakanya ipesenti indlela abalandeli be-34,608 basasazwa ngayo nendlela ezi zikhulile ngayo kwiinyanga ze-8 zokugqibela apho zifumene inani elingu-7,885 abalandeli ngokubanzi kwe-29%.
Akhawunti Umxholo Abalandeli Ulwalamano lwabalandeli Autho
ubuhlanga % Wakhula kwiinyanga ze-8
@gisuser Umsebenzisi we-GIS Iindaba ze-Tabloid ze-geospatial medium. 11,125 4.46 67 32% 29%
@MundoGEO GEO World I-portal content portal, imicimbi kunye namaphephancwadi kwi-geospatial medium. 8,057 0.91 ? 23% 21%
@Esri_Spain Esri Spain I-akhawunti yaseburhulumenteni yakwa-Esri eSpain 2,943 2.21 56 9% 31%
@URISA URISA Umbutho wabaqeqeshi be-GIS 2,300 2.11 39 7% 34%
@geofumadas nina egeomates Iziqulatho zabasebenzisi bezobuchwepheshe beCAD / GIS 1,831 4.67 69 5% 44%
@orbemapa Orbemapa Ibhulogi ne-GIS, i-GPS kunye nezinye izihloko 1,816 0.91 14 5% 34%
@comunidadign IGN yoluntu Isikhundla esikhutshwe yiNational Geological Institute 1,545 2.12 21 4% 30%
@gim_intl GIM International Ingxelo yeGeospatial, ifomathi eprintiweyo 1,375 1.91 44 4% 32%
@pcigeomatics I-PCI Geomatics Inkampani yaseCanada ejoliswe kuyo kwintsimi yokujonga kude kunye neenkonzo ezinxulumene nazo 1,374 1.35 46 4% 38%
@ClickGeo Anderson Madeiros Uninzi olunomxholo omtsha kwi-geospatial field, kwisiPutukezi 1,219 8.82 45 4% 41%
@POBMag Point of Begin Uphando lwezolimo kunye nezinye iifayili 1,023 5.19 6 3% 29%
Umsebenzisi we-GIS yi-akhawunti kunye nenani elikhulu labalandeli, ClickGEO olugcina abalandeli abangcono / obulandelayo. I-Geofumed iGunya elikhulu kunazo zonke kwaye siyavuya ukukwazi ukuba sikhula.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ezinye iziganeko zeengxaki zezopolitiko eHonduras
Post Next I-2012 engcono kwii-GeofumadasOkulandelayo "